Indlwana Ebhishi e-Alkimos - I-Bed & Breakfast - I-Airbnb
Indlwana Ebhishi e-Alkimos - I-Bed & Breakfast
Alkimos, Western Australia, i-Australia
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Victoria
Izivakashi ezingu-94% zakamuva zinikeze inqubo yokungena isilinganiso sezinkanyezi ezingu-5.
U-Victoria uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-94% wezivakashi zakamuva.
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Victoria izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Indlwana engasolwandle enkabeni yomphakathi onezinkanyezi eziyisithupha, uhambo olufushane oluya ebhishi elinesihlabathi esimhlophe esingapheli. Indlu ikhanya ngokugqamile, iyakhanya futhi iyathokozisa. Indawo yokuhlala ingaphakathi kwekhaya labanikazi. Umbhede omkhulu ekamelweni lokulala eliyinhloko. Ingubo yokugqoka kanye negumbi lokugezela langasese. Igumbi lokuhlala langasese elinombhede wasemini, i-TV, i-Apple TV, itafula/izihlalo, ifriji, iketela, i-toaster, kanye nephakethe lobisi lokwamukela, isinkwa, okusanhlamvu kanye namabhisikidi anetiye/ikhofi kuyatholakala.
Ukuhlala endlwaneni yami kukunika indawo yangasese ngaphakathi kwekhaya lami. Endaweni yezivakashi uzoba negumbi lakho lokulala, ikamelo lokuhlala negumbi lokugezela, elihlukaniswe engxenyeni eyinhloko yendlu.
Indawo ithule, inepaki eliphambi kwendlu ngokuqondile, ipaki lokuzivocavoca lomphakathi eliseduze nomnyango, uhambo olufushane oluya ebhishi, izitolo zendawo, nesiteshi sesitimela yimizuzu engu-5 uma ushayela, sikuxhumanisa enkabeni ye-Perth emizuzwini engu-40 noma eduze ne-Joondalup emizuzwini engu-15. Isitimela sihamba ngokuqondile esiteshini sesitimela sase-Butler, ukuya e-Perth, kuze kufike e-Mandurah okuyidolobha elithandwayo elisogwini cishe ihora eningizimu ye-Perth.
Umphakathi wase-Alkimos Beach ungumphakathi omusha onamandla ezinkanyezi eziyisithupha oye wawina imiklomelo eminingi futhi usebenzisa amandla elanga aningiliziwe namasistimu okugcina amabhethri omphakathi ukunciphisa umthelela wethu endaweni ezungezile. Kunezindlela ezinhle zokuhambahamba ezizungezile nezindlela ezifanele zomjikelezo zokukhuthaza ithrafikhi yomphakathi. I-Yanchep National Park ikude ngemizuzu engu-10 ngemoto futhi inikeza ukuhamba okubanzi kwamahlathi, i- kangaroos ekuseni nasebusuku, kanye nepaki le-koala. Kunamabhishi amaningi aseduze, namathilomu endawo ongawahlola. Ungahamba ngezinyawo ebhishi bese uthola i-The Beach House noma i-Oceans 27 yekhofi lakho lasekuseni noma imenyu emnandi yosuku nobusuku.
4.96 · 75 okushiwo abanye
Nakuba lena kuyindawo entsha, iyashesha ukuba yindawo ethandwayo kulabo bantu abafuna ukwehlisa izinyathelo zabo endaweni ezungezile. Le ndawo iklanyelwe ukukhuthaza ukuhamba ngezinyawo nokushova ibhayisikili futhi ngenxa yalokho kwakha isethingi yokuhlangana nomakhelwane nabanye abantu bendawo. Ipaki elisha lokuzivocavoca lisanda kuphothulwa eceleni kwendlu yami ukukhuthaza indlela yokuphila esebenzayo nenempilo futhi i-Alkimos Beach ngumphakathi wokuqala ophephile wokutshuza e-Australia. Ibhishi lendawo liyamangalisa futhi likuvumela ukuthi uhambahambe esihlabathini ukuze uthole isidlo sasekuseni esingajwayelekile e-Shore Cafe/Oceans 27 kanye nokukwazi ukuhamba konke lokho ukudla endleleni emuva. I-Mindarie Marina ikude ngemizuzu eyishumi ngemoto futhi inezindawo zokudlela zokuphumula nokujabulela ukushona kwelanga okuhle phezu koLwandle lwase-India.
Ngena: 13:00 - 22:00
Hlola ezinye izinketho ezise- Alkimos namaphethelo